musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Busted! Vatorwa Vanoviga nekunwa muThailand bhawa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Pattaya Pol. Col. Chitdecha Songhong, superitendentent weNongprue police station, vakatungamira timu yevanochengetedza mutemo pahusiku hwehusiku hwehusiku husiku husiku mazuva apfuura muna Chikunguru 26, 2021.
Zvizvarwa gumi nerimwe zvekune dzimwe nyika uye mumwe muThai akawanikwa munzvimbo yepasi pekunwa vachinwa zvinwiwa zvinodhaka.
Wese munhu akasungwa ndokupomerwa mhosva yekutyora Mutemo weEmergency.
Parizvino, Thailand iri pasi pekuvharwa uko kunosanganisira kurambidzwa kuungana kwevanhu uye kutengesa kana kunwa doro.
Chavakawana kwaive kuungana kwevanhu gumi nevaviri vekune dzimwe nyika uye mumwe muThai vachinwa zvinwiwa zvinodhaka mudura repabhawa. Vakasungwa vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo weEmergency Decree uye nekusateerera zvavakatemerwa neChonburi Department of Disease Control inorambidza kuungana kwevanhu nekutengesa kana kunwa doro.
Mapurisa ePattaya akarumwa nenjodzi nevagari veSoi Wat Boon Samphan kuti imwe nzvimbo munzvimbo iyi yaigara ichiita mabiko ekunwa panzvimbo, ayo aiziva kuti aipesana nemitemo yekukiya yakatemwa neDhipatimendi reChonburi Disease Control.
Mune dzimwe nhau dzebhawa, vhidhiyo yakabuda zvakare mazuva maviri apfuura, inoratidza inozivikanwa Pattaya "Kokonati Bhawa" akatamira kuSoi Buakhao. Vhidhiyo inoratidza vakadzi vakapfeka zvounyengeri uye vakuru Pattaya expats vakagara pamwe chete vasina masiki pavanonwa. Mumwe mutyairi wemudhudhudhu munzvimbo iyi akasimbisa kuti vakadzi vanofungidzirwa kuti pfambi varipo husiku hwega hwega.